Markab laga leeyahay Talyaaniga oo afduub loogu haystay xeebaha Somaliya oo la sii daayey. [Akhris …] – Radio Daljir
Markab laga leeyahay Talyaaniga oo afduub loogu haystay xeebaha Somaliya oo la sii daayey. [Akhris …]
Roma, Aug 10 – Markab laga leeyahay dalka Talyaaniga oo indhaawalaba ay koox burcad badeed Soomaali ah ay afduub ugu heysteen degmada Laas Qorey ee gobolka Sanaag ayaa ay sii daayeen.
Warka oo ay warfaafdintu ay ka heshey wasaaradda Amuuraha dibadda ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa uu intaas ku darayaa in ay ka qeyb qaateen soo sii deynta Markabkaan Dawladda Puntland iyo DFKMG ee Soomaaliya.
Warar hoose oo aannu heleyno ayaa ku soo warramayo in Burcaddu ay heleen Madax furasho qaddarkeedu uu le’egyahay $4 Malyuun oo Doollarka Mareykanka, waxaase warkaasi gaashaanka u daruurey beeniyeyna jiritaankiisa Wasiirka Amuuraha Dibadda ee Talyaaniga Franco Frattini oo sheegey in Ra’iisul Wasaaraha Dawladda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu shakshi ahaan arrintaas ku sammeeyey faro gelin deetana ku guuleystey in si nabdoon lagu soo sii daayo.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Talyaaniga waxaa uu u mahadnaqay Dawladda Puntland iyadana in ay ka qeyb qaadatay sidii hab nabad gelyey ay Burcadda ay u sii daayeen Markabka iyo shaqaalaha Saaran.
Markabka ayaa waxaa saarnaa 16 shaqaale ah waxaana ay ku maqnaayeen Gacanta afduubayayaasha muddo dhan Afar Bilood.